Xubno kamid ah Qurbo-jooga Kulmiye oo Hargeysa lagu soo dhaweeyey. |
Xubno kamid ah Qurbo-jooga Kulmiye oo Hargeysa lagu soo dhaweeyey.
Wasiir-u-dawlaha Macdanta iyo xubno isugu jira aqoonyahan iyo waxgarad Madaarka Hargeysa ku soo dhaweeyey Marwo Khadra Daa’uud iyo Cabdilaahi Cali oo kamid ah Xisbiga talada haya ee Kulmiye
Hargeysa(GNN)-Wasiir-u-dawlaha Macdanta iyo Tamarta Yuusuf Cismaan Garas, Aqoon-yahanka, Cuqaasha iyo dad-weyne aad u tiro badan ayaa Madaarka diyaaradaha ee Magaaladda Hargaysa ku soo dhaweeyey xubno kamid ah Qurbo-joogta Xisbiga Kulmiye oo ka yimi Dalka Sweden.
Xubnahan la soo dhaweeyey oo kala ah Cabdilaahi Cali Ibraahim iyo Marwo Khadra Daa’uud Ismaaciil oo labadooduba ka tirsan Madaxda xisbiga Kulmiye ee Qaarada Yurub, ayaa dalka u yimi howlo la xidhiidha sidii ay doorkooda uga qaadan lahaayeen Olollaha Doorashada Madaxtooyada iyo sidoo kale arrimo samo-fal oo ay doonayaan inay dalka ka fuliyaan inta ay joogaan.
Ugu horayn waxa munaasibada soo dhaweynta ka hadlay Eng. Axmed Cabdi Ibraahim oo kamid ah Golaha dhexe ee Xisbiga KULMIYE iyo Guddoomiye ku-xigeenka Guddida horumarinta ee Talosame Axmed Aw Xuseen Furre, kuwaasoo sheegay in soo dhaweynta weftigani ay tahay mid lagu muujinayo kaalinta muhiimka ah ee ay Bulshada Somaliland ugu jiraan Marwo Khadra Daa’uud Ismaaciil iyo xubnaha la socdaa, iyagoo intaa ku daray inay ka filayaan inay doorkooda ka ciyaaraan howlaha Doorashada, sidii Xisbiga Kulmiye talada ugu guulaysan lahaa.
Dhanka kale, Marwo Khadra Daa’uud iyo Cabdilaahi Cali Ibraahim, oo soo dhaweynta loo sameeyey ka dareen celiyey, ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta loo sameeyey, waxaanay u mahad naqeen masuuliyiinta soo dhaweysay oo uu ugu horeeyo Wasiir u-dawlaha Macdanta Yuusuf Cismaan Garas.
Geesta kalena, waxa ay sheegeen inay agab mucaawimo ah gaadhsiin doonaan deegaamo kamida dalka, iyagoo halkaa ka xusay inay Gaadhi Ambalaas ah gaadhsiin doonaan Degmada Dacarta oo kamida Degmooyinkii uu dhawaan Madaxweynuhu magacaabay.
Wasiir-u-dawlaha Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Mudane Yuusuf Cismaan Garas oo isaguna halkaa ka hadlay, ayaa ku dheeraaday sida uu ugu faraxsan yahay in ay dalka soo gaadhaan lamaahan wax badan oo wanaag ah dalka ka geystay.
Waxa uu wasiirku uga mahadnaqay Marwo khadra iyo Seygeeda Cabdilaahi Cali Ibraahim Deeqdan ay soo gaadhsiiyeen Degmadda dacarta, taasi oo uu sheegay inay wax badan ka tari doono dhanka caafimaadka oo baahi weyn loo qabay.
Wasiirku waxa uu ku guubaabiyey in ay dedaalkooda samafalka ah halkaa ka sii wadaan, isagoo alle uga beryey in uu miisaanka xasanaadka ugu daro samo-falka ay ku howlan yihiin.